WD-40 na microwaved tampons: nzuzo nke nri foto kpughere - News Ọchịchị
WD-40 na microwaved tampons: nzuzo nke nri foto kpughere
Ọ bụ ọrụ nke a nri stylist arụpụta anya na-atọ ụtọ na igwefoto - ọbụna ma ọ bụrụ na makeover doo nri inedible. Isii stylists-agwa anyị aghụghọ ha
Isiokwu a na-akpọ “WD-40 na microwaved tampons: nzuzo nke nri foto kpughere” e dere site Angelina Chapin, n'ihi na theguardian.com on Monday 4th January 2016 15.51 UTC
Behind kasị ọkachamara nri photos bụ a stylist na-aghụghọ onye nkiri. ndị a deceits nso si a aka nke lipstick ka redden a strawberry, ka "milkshakes" mere si gwere poteto. Ọ bụghị na nri stylists bụ ndị ụgha na aghụghọ. Ha na-na nnọọ na azụmahịa nke improvisation.
N'oge nile nke 10 awa ọ na-ewe, na nkezi, mezue a oge ịse foto, stylists na-atụ anya na-edozi bụla e nyere nsogbu na ntụpọ. Ọ dịghị tzatziki on set? Eme ka a na-eme na Mayonezi ma ọ bụ pịa ude na ngwa nju oyi. A ahịa chọrọ na toki akpụkpọ anya a "obere ihe red"? Mma nwere nri agba? Na aka.
"Mgbe agbapụ, ị apụghị ịkwụsị na-ekwu: 'Hey, ugh, Echefuru m nke a,' "Na-akọwa Denise Stillman, ihe Orange County dabeere nri stylist na-meela ke azụmahịa maka 26 afọ. "Ị dị nnọọ nwere iji jide n'aka na ị [ewetara ezu ihe on set na] ekpuchi gị niile bases mgbe ahụ [jụọ onwe gị], 'Olee ihe ọzọ nwere ike ịkpata nsogbu?' "
Ma ọ bụghị ihe niile na-faked. The ngwaahịa ndị mgbasa ozi na-anwa ire a na-agba, -akọwa Stillman. Mgbe ole, ọmụmaatụ, ọ Ome otu mgbasa ozi maka Breyers, ọ Ome ndị ezigbo ice ude. Ma ọ bụrụ na ọ na-styling Gay Lea Foods 'pịa ude, na ice ude ọ na-adịgide atop nwere ike nke ihe ọ bụla - ka oge ra ya anya na-atọ ụtọ.
Ma agbapụ a telivishọn azụmahịa ma ọ bụ ebipụta advertisement, a nri stylist mgbaru ọsọ dị mgbe mesie ihe mgwa si maa mma.
"M na dị ka ntutu na etemeete maka nri,"Na-ekwu Charlotte niile, a stylist dabeere na New York. "Mgbe unu hụrụ ụdị na-eje ije ala runway, ha adịghị ele anya dị ka nke na. Ma mgbe ha na-apụta nke etemeete, ị dị ka, 'Chaị.'"
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị Instagram nri photos yie Rie ọma mkpuchite, anyị na-na-anakọtara ụfọdụ pro Atụmatụ ga-enyere. Isii nri stylists-eje ozi anyị ha na nzuzo na-esi mee ọsọ efere anya njikere maka ha nso-acha ọkụ.
Enchiladas: gwere poteto nye onye ahụ nke nnukwu
N'ihi na a tọrọ ụtọ-na-achọ enchilada, tinye gwere nduku. Foto: Photo site Rick Gayle. Food styling site Kim Krejca.
Mexico nri a abụghị ihe kasị photogenic. Ọ dịghị onye maara nke a karịa ka Kim Krejca, a Phoenix dabeere na stylist na-arụ ọrụ na otutu ndịda ọdịda anyanwụ nri. "Enchiladas na ihendori ọbara ọgbụgba n'ime agwa [na-] bụghị nnọọ anya obi ụtọ,"Ọ na-ekwu. "Ị ga-gbanwee na ma ka na-emezu ihe-oriri."
Inye enchiladas ọdịdị bulkiness (dị ka hụrụ n'elu), ọ stuffed ha na ntabi gwere poteto, a stylist si aga na-ejuputa n'ihi na ha bụ mfe ime na ebu. Mgbe ahụ Krejca kwukwara anụ na veggies ruo na nsọtụ ebe achịcha emeghe. Ịrụcha efere, ọ na-eji a okpomọkụ egbe ime ka cheese-agbazekwa n'ụzọ zuru okè n'elu.
tacos: ịchọ mma fom na-shells oghe
tacos: -agbalị ịchọ mma fom, mama, na WD-40. Foto: Photo site Rick Gayle. Food styling site Kim Krejca.
Na ndụ n'ezie, tacos bụ a na-atọ ụtọ ọgbaghara. Ime ka ha adị na igwefoto, Krejca glued abụọ achịcha ọnụ ma dọba ịchọ mma fom n'azụ anụ na-shells oghe. N'ihi na ọchịchịrị ma na kemmiri-na-achọ beef, ọ na-ese iberibe na a aja aja ihendori a na-akpọ Kitchen Bouquet, mere nke mmiri na nri agba?. Krejca mgbe ahụ sprayed ndochi na WD-40, ya na nzuzo ngwá agha mee ka Mexico nri itike. Stillman eji red ose na ebe nke diced tomato maka ihe vibrant agba na agwa ọka sirop on agwa ya mere ha na-ele anya ooh na ọhụrụ.
Mkpụrụ akụkụ: ndị isi ngwaahịa na sunscreen-eme ka a zuru okè 'mmiri ara ehi'
Na-amasị gị gị cereal akọrọ ma ọ bụ na ntutu ude? Foto: Photo site Chris Elinchev na Small Ọdọ mmiri Productions. Food styling site Tamara Kaufman.
Nke a nwere ike imebi gị agụụ, ma nke mmiri ara ehi mee ihe n'ime cereal photos na-abụkarị adịgboroja. Ebe ọ bụ na ezigbo stof ngwa ngwa na-eme ka cornflakes anya soggy, nri stylists na-abịa na uzo ozo. Na nke a foto, Wisconsin dabeere Tamara Kaufman eji Wildroot, a ajị ọcha ude n'ihi ndị na a sunscreen ude mmiri-dị ka anọgidesi na ọtụtụ stylists tukwasi anya-uku. Krejca prefers na agadi-akwụkwọ usoro nke na-acha ọcha mama, nke foto dị ka ezigbo ihe. Mgbe Uru ime iji n'ezie mmiri ara ehi, ọ bụ naanị a nnọọ obere ego. Dị ka Michelle Rabin, a Toronto dabeere nri stylist, i nwere ike idowe ihe ndị kasị mma iberibe cereal na a nnukwu efere jupụtara akwukwo nri shortening na-ekpuchi ya na mkpa oyi akwa nke mmiri ara ehi. "The shortening-eguzogide mmiri mmiri na ya anya ka dum nnukwu efere jupụtara mounds nke cereal,"Ọ na-ekwu. "The iberibe ga-anọ mara crisp ruo ogologo oge."
Kọfị: -ebelata ike soy ihendori na gelatin-enye a ezigbo onye anya
N'ihi na a ezigbo onye-achọ kọfị, -agbalị na mmiri na gelatin. Foto: Photo site na Bet Galton. Retouching site Ashlee Gray. Food styling site Charlotte niile.
Black kọfị na-esi ike na-arụ ọrụ n'ihi na nke mmanu mmanu sheen. na a latté ma ọ bụ cappuccino, ụfụfụ ga-ngwa ngwa ikusi. Na nke a foto, Ịhụ eji a Nchikota Kitchen Bouquet, mmiri na gelatin na-enye kọfị a ezigbo anya. Na a tuo, Rabin ji mmiri-ala soy ihendori na ozugbo na-eji aka ha emepụta na ude na ufufo anu browner na set nke a na-ewu ewu Canadian brand. "M na-ahụ na billboard m rụrụ ọrụ na na Na na na dị ka: 'Nke ahụ na-akpa ọchị, n'ihi na nke ahụ abụghị a coffee,' "Ọ na-ekwu. Kaufman-eji ezigbo ihe mgbe o kwere omume, ma na-agbakwụnye, tụlee nke soapy mmiri gburugburu perimeta na-eyedropper ka simulate ọhụrụ ime biya. The froth, stylists-ekwu, A na-mere si piped ncha ụfụfụ.
toro toro: o nwere ike ịbụ nke ndu na ọbara n'ime, ma akpụkpọ anya ọma
Undercooked toki a na-agba na mgbasa ozi. Foto: Photo site Marshall Troy. Prop styling site Grace Knott. Food styling site Charlotte niile.
Ọ bụla n'ụlọ siri nri maara na ọ bụ ike ime ka a nnụnụ crispy nọ n'èzí na-na ooh ke esịtidem. Luckily, nri stylists naanị ga-elekwasị anya aesthetics, nke pụtara dịghị mgbe ha n'ụzọ zuru ezu esi nri otu. "Ọ dị mkpa ka ọ ghara overcook ha nke mere na akpụkpọ mụ achọ ooh, plump ma na kemmiri ihe,"Na-ekwu niile. "Ndị a bụ visual cues na-eme ka ọnụ gị mmiri mgbe ị na-ele ya anya." New-York dabeere stylist Brian Preston-Campbell-ekwu na mgbe mgbe o eji ise ma ọ bụ isii turkeys maka awa ole na ole onye ọ bụla na-na "zuru okè dike nnụnụ". "Ọ bụ ka ndu na ụdị ọbara n'ime,"Ọ na-ekwu. "Ọ bụ ụdị dị mkpari ma ọ bụ banyere ọgwụgwụ ngwaahịa na foto."
Na nke a shot, Ịhụ pinned ala toki si akpụkpọ otú ọ ga-akwa ndị na oven. Ọ lined na pan na stuffed nnụnụ na a mmiri tinye akwụkwọ towel n'ihi ya, ọ ga-uzuoku kama n'aka crispy. Iji mezuo nke ahụ aja aja, egbuke egbuke anya, ọ leghaara toki na a ngwakọta nke mmiri, Kitchen Bouquet na efere ncha.
Ice ude ma ọ bụ pịa ude: shortening, ọka sirop na frosting
Frosting plus icing sugar-eme ka otu nnukwu-na-achọ ice ude. Foto: Photo site Marshall Troy. Prop styling site Grace Knott. Food styling site Charlotte niile.
Ọ bụrụ na ice ude ndị a ụmụ mmadụ na model, ọ ga-adị a diva. The eji megharịa ọnụ bụ ike na-akpụzi, na ọ bụrụ na ị na-agaghị styling na a refrigerated ohere, na-agbaze ọsọ ọsọ. Iji zere ndị isi ọwụwa, ọkachamara na-echigharịkwuru ọzọ Efrata. Kee "ice ude" na ekpe, Niile weere frosting na icing sugar (na cone aka nri bụ ezigbo ihe), Ma ọtụtụ nkịtị adịgboroja ice ude uzommeputa bụ Nchikota akwukwo nri shortening, powdered sugar na ọka sirop.
N'ihi na ndị ọzọ milky desserts, stylists nwere ọtụtụ hacks. N'ihi na a dollop nke pịa ude, Ịhụ eji a na-abụghị Mmiri ara ehi creamer na "ọ dịghị nāchọ ma ọ bụ ịkwa ákwá". Kaufman prefers Barbasol shaving ude ma ndetu: "Nwanyị nke na-ezighị gbalịrị a aru Ọ dịghị ya mma." N'ihi milkshakes, Stillman-eji gbara ụka ude n'ihi na ọ bụ oké na mfe swirl.
ọṅụṅụ: na kentuoyi iko? Ọ bụ ịgba-on deodorant
Ọ bụrụ na gị ihe ọṅụṅụ kọrọ nri sheen, dị nnọọ ịgba ụfọdụ deodorant na ya. Foto: Alamy
Stylists Ekwela ezigbo booze ma ọ bụrụ na ad bụ n'ihi mmanya. Iji mee ka cocktails, Ịhụ mixes nri agba? Na mmiri, a atọ Kaufman na-eji ike "chardonnay" si diluted Kitchen Bouquet. na eziokwu, mmiri mmiri onwe ya bụ sideshow. "The akụkụ kasị mkpa banyere cocktails bụ visual cues,"Na-ekwu ihe niile - cues dị ka ice, fizz, egosipụta na froth. "Ha [eme ka ihe ọṅụṅụ] anya-enye ume ọhụrụ. "
N'ihi na friji ọṅụṅụ ndị dị ka margaritas na daiquiris, Uru-adabere na ice powder, ibe n'ibe nke gelatin na-ele anya dị echi ọnụ n'ala ice mgbe weere mmiri mmiri. Ha na-eji adịgboroja plastic ma ọ bụ acrylic ice cubes, nke na-adịghị agbaze n'okpuru ọkụ igwefoto ọkụ na vaseline on rim nke margaritas. Ka imepụta ntu oyi, Stillman uwe a biya Foto Ụlọ Nga na ịgba-on deodorant na-eji a ngwakọta nke Scotchguard na glycerin-eme ka mmanya ọtọ bịrịbịrị anya oyi na chaplet nke odide. "Gịnị a hassle ọ ga-abụ ma ọ bụghị na,"Na-ekwu Stillman. "Ụzọ a, ị nwere ike họrọ na ọkwa nke wetness ke iko. "
nke uzuoku pasta: nēsì ísì utọ-enye onye ahụ nke uzuoku
Na oge mgbe uzuoku adahade si pasta dị ka alụlụ n'elu ugwu bụ ike weghara ndammana na igwefoto. Kaufman odịbe a tin foil ngwugwu nke uzuoku ibe n'ime pasta efere na-agbakwụnye mmiri iji mepụta vepo. To get the same effect, she has also lit incense and later removed the stick with Photoshop, while other tricks involve a clothing steamer or cigarette smoke. By far the most interesting method is to microwave water-soaked tampons (cotton balls work as well) and bury them behind a dish. “I have them in my kit just in case,” says Kaufman. Regardless of the technique, she says steam should always be shot against a dark background.
← 10 nke kasị mma njem ngwa ọdịnala Tipron: A Rolling emetụ nwa anya robot projector [Na] →